Wasiirkii Arrimaha Gudaha Ee Xukuumadii Daahir Rayale Oo Ka Hadlay Sida Uu Arko Xilka Daakhiliga Ee Uu Madaxweyne Siilaanyo U Magacaabay Warancade | Salaan Media
Wasiirkii Arrimaha Gudaha Ee Xukuumadii Daahir Rayale Oo Ka Hadlay Sida Uu Arko Xilka Daakhiliga Ee Uu Madaxweyne Siilaanyo U Magacaabay Warancade
July 1, 2013 | Published by: Hamse
June 30,2013 Hargaysa(SM) -Wasiirkii arrimaha gudaha ee xukuumadii UDUB Md. Cabdillaahi Ismaacil Cali (Cirro), ayaa soo dhaweeyay go’aanka uu Madaxweyne Silaanyo wasiirka arrimaha gudaha ugu magacaabay Cali Maxamed Warancade.
Cabdillaahi-Cirro, oo aan muddooyinkan dambe ka hadal arrimaha siyaasadda, ayuu Geeska Afrika weydiiyay bal sida uu u arko magacaabista wasiirul daakhiliga ee Cali Warancade iyo weliba wasiirka arrimaha dibadda. “Waxaan ku bogaadinayaa madaxweynaha wasiirka daakhiliga ee uu Warancade u magacaabay iyo Maxamed Yoonis Biixi oo uu isna u magacaabay wasiirka arrimaha dibadda iyo weliba Cali Sandule oo isna uu u dhiibay wasiirul dawlaha nabadaynta gobalada bari. Waxaanan u arkaa saddex nin oo hawshaas ka soo bixi kara.”
Isagoo Cabdillaahi-cirro, ka hadlaya Cali Warancade iyo xilka loo magacaabay, wuxuu yidhi ‘Muddo dheer ayaanu wada shaqaynay oo waa nin aan aqaano aqoontiisa iyo hawlkarnimadiisa. Waxaanan aad ugu kalsoonahay inuu yahay nin ku munaasib ah xilka loo magacaabay, waxaanan isleeyahay maanta Somaliland ma joogo qof kale oo shaqadaas kaga habooni.”
Mar uu ka hadlayay Maxamed Yoonis Biixi, oo isna ah wasiirka arrimaha dibadda, wuxuu yidhi “Maxamed Yoonis waa nin xidhiidho caalami ah leh oo dunida la jaanqaadi kara, isagana waxaan rajaynayaa inuu Somaliland u horseedi doono jiho cusub iyo aqoonsi.”
Cali Sandule, oo ah wasiirul dawlaha nabadaynta ee gobalada bari, wuxuu isna ka yidhi “Cali Sandule, sidoo kale waa nin aanu wada shaqaynay nin kaga haboon oo gobaladaas bari loo magacaabi lahaa ma arko.”
Mar la weydiiyay bal talooyinka uu u jeedin lahaa Cali Warancade, maadaama oo uu wasiir ka soo noqday wasaaradda wakhtigan loo magacaabay ee arrimaha gudaha, wuxuu Cabdillaahi-Cirro, yidhi “Cali waxaan waxaan u arkaa inuu yahay nin had iyo jeer kalsooni isku qaba oo la tashan doona cid kasta oo nabadgelyada aqoon u leh. Waxaan filayaa inuu yahay nin ku haboon oo aan cuqdad ka qabin inuu dadka la tashado, waxaanan aaminsanahay inuu yaay nin isku kalsoon oo cid kasta talada weydiin kara. Allena waxaan ka baryayaa inuu u fududeeyo.”